बिज्ञान/प्रविधि Archives - Sawal Nepal
काठमाडौं । एन्ड्रोइड भर्सेस आईओएस, सिङ्गो मोबाइल प्रविधि क्षेत्रमा चल्ने सबैभन्दा ठूलो र कहिल्यै नटुङ्गिने बहस हो यो । मोबाइल इकोसिस्टमभित्र यी दुईकाे खेलमा प्रयोगकर्ताहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिने गरेका छन् । त्यसो त एन्ड्रोइडको तुलनामा धेरैले आईओएसलाई रुचाउँछन् । यसैबीच पछिल्लो समय एन्ड्रोइडले आफ्नो एन्ड्रोइड इलेभेन भर्सन र एप्पलले आईओएस फाेर्टिन भर्सन ल्याएको छ
सन् २०२० का सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेका पासवर्डहरु एकदमै असुरक्षित रहेको पाइएको छ । यस्तो हुदा धेरै प्रयोगकर्ताहरुको डेटा जोखिममा रहेको छ । सजिलो खालको पासवर्ड राखेमा ह्याकरहरले सजिलै अनुमान लगाएर ह्याक गर्न सक्दछन् । नर्डपासले गरेको सर्वेक्षणमा शीर्ष तीनमा १२३४५६, १२३४५६७८९ र पिक्चर१ रहेका छन् । त्यसपछि चौथो स्थानमा भने मात्रै ‘पासवर्ड’ लेखिएको छ
काठमाडौं । गुगलको म्यासेजिङ एपमा अब इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन प्राप्त हुने भएको छ । गुगल म्यासेजमा इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन आउँदा प्रयोगकर्ताको म्यासेज अर्को तेस्रो पक्षले पढ्न सक्नेछैन । जसमा अदालत र प्रहरीको समेत केही लाग्ने छैन । गुगल म्यासेजमा इन्ड टु इन्क्रिप्सन लागु हुँदा गुगल कम्पनीले समेत त्यस्ता म्यासेजमा एक्सेस बनाउन सक्ने छैन
टेलिकमले ल्यायो नयाँ अफर, भ्वाइस र डाटा दुवै एउटै प्याकमा लिन सकिने
नेपाल टेलिकमले हाल उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरअन्तर्गतको प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याकलाई थप सुविधा सहित केही परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित अफर शुक्रबार राती १२ बजे पश्चात लागु हुनेछ । हाल उपलब्ध भइरहेको प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याकअन्तर्गत प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने गरी ७ दिनका लागि रु. २५० मा उपलब्ध भइरहेको प्याक
काठमाडौं । सायद तपाईं हामीमध्ये धेरै जनाले दिउसो तथा रातमा समेत मोबाइल फोन खेलाएर धेरै समय बिताउँदछौँ । आखिर मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा ठ्याक्कै कति समय मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हेरेर बिताउँछ होला ? हालैको एउटा अध्ययनले निकै रोचक तथ्य पत्ता लगाएको छ । मोबाइल फोनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने वेबसाइट ह्विस्सलआउटले गरेको अध्ययन अनुसार अमेरिकीहरुले औषतमा आफ्नो
सुबिसु एमएएनआरएसमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको पहिलो आईएसपी
काठमाडौं । सुबिसु एमएएनआरएस (म्यानुअल्ली एग्रिड नर्म्स फर राउटिङ सेक्युरिटी)मा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको पहिलो आईएसपी भएको छ । एमएएनआरएस भनेको राउटिङ सिक्युरिटी सम्बन्धी परामर्श दिनको लागि इन्टरनेट सोसाइटी ले सुरु गरेको ग्लोबल पहल हो । जसले इन्टरनेट राउटिङमा हुने समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरी राउटिङ सेक्युरिटी सम्बन्धी सुरक्षित तरिकाले काम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो ग्राहक सेवालाई थप सहज तथा परिष्कृत बनाउँदै भैरहवामा सुविधासम्पन्न एनसेल सेन्टर संचालनमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीका बेलामा सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पुर्ण मापदण्ड पालना गर्दै यो सेन्टर संचालनमा ल्याइएको हो । भैरहवाको मिलनचोक–५ स्थित कोइराला कम्प्लेक्समा रहेको यस एनसेल सेन्टरले ग्राहकलाई एकै स्थानबाट सम्पुर्ण ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ । एनसेल
ह्वात्तै बढ्यो नेपाल टेलिकमको ह्याप्पी लर्निङ प्याकेज किन्नेको संख्या, यी हुन मुख्य आकर्षण
काठमाडौं, कात्तिक २३ । नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको ह्याप्पी लर्निङ्ग प्याकको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । लकडाउनको समय बढेसँगै शैक्षिक शत्र नै खेर जाने अवस्था आएपछि बैकल्पिक शिक्षा संचालनका लागि नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको ह्याप्पी लर्निङ्ग प्याक पछिल्लो समयमा सवै सिमकार्डबाट सहजै सेवा लिन पाउने भएसँगै लोकप्रिय बनेको हो । नेपाल टेलिकममा सहप्रवक्ता रंजित लोहिया
कम्प्युटर प्रोसेसर उत्पादक कम्पनीहरु एएमडी र झिलिङ्क्स एक हुने
काठमाडौं । चिप्स उत्पादक कम्पनी एएमडीले झिलिंक्स नामको अर्को चिप्स उत्पादक कम्पनीलाई ३५ अर्ब डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो खरिदसँगै अर्को विश्व प्रसिद्ध चिप्स उत्पादक कम्पनी इन्टेलसँगको प्रतिस्पर्धा अरु तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ । झिलिंक्सलाई एएमडीमा गाभेसँगै यसको शेयर बजारको अनुपात पनि टुंगो लागेको छ । झिलिंक्सका शेयरधनीले अब प्रतिशेयर १.७२३४
फेसबुकले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ सफ्टवेयर, १०० भाषाको गर्न सक्छ अनुवाद
काठमाडौं । फेसबुकले मसिन लर्निङमा आधारित एउटा नयाँ सफ्टवेयर सार्वजनिक गरेको छ । जसले १०० वटा भाषालाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न सक्छ । फेसबुकको दाबी अनुसार यो विश्वकै पहिलो सफ्टवेयर हो, जसले १०० भाषाको अंग्रेजी अनुवाद गर्न सक्छ । फेसबुकको यो सफ्टवेयर ओपन सोर्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयर हो । जसबाट सामाजिक सञ्जालमा १६० भन्दा धेरै भाषामा
झापाका विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनद्धारा २० गते मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोजना, १५ हजार बढी मोटरसाइकल प्रयोग हुने अपेक्षा